La Yaabka Aduunka: Nin120 sano jir ah oo aroosay haweenay 60 jir ah (SAWIRO) – SBC
La Yaabka Aduunka: Nin120 sano jir ah oo aroosay haweenay 60 jir ah (SAWIRO)
Hazi Abdul Noor oo ah nin waayeel ah oo 120 sano jir ah ayaa loo aqoonsadey caruurska dunida ugu faca weyn ka dib markii uu la aroos galey haweenay isaga cimrigiisa kala bar jirta, oo lagu magacaabo Samoi Bibi.
Arooska 120 sano jirka iyo duqda 60 jirka ah oo ay ka soo qayb galeen 500 oo qof marti ah ayaa wuxuu ka dhacay Tuulada Satghorin oo ka tirsan degmada Patharkandi ee gobolka Bangal ee dalka Hindiya.
Arooskan oo dhacay axadii la soo dhaafay ayaa waxaa la sheegay in Hazi uu taariikhda noqdey qofkii ugu horeeyey ee dunida da’daasi ku guursada.
Mr Nor ayaa guurkan wuxuu noqonayaa kiisii labaad waxaana guurkan uu u go’aansadey ka dib markii ay lix sano ka hor geeriyootey xaaskiisii hore .
Hazi Azir Uddin oo ah wiil uu dhaley 120 sano jirka aroosay ayaa sheegay in Aabahood uu mudo ka dalbanayey in lagu gacan siiyo si uu u guursan lahaa, waxaase uu sheegay in iyaga ay la ahayed wax aan dhici karin in 100 sano qof ka weyn uu si fudud ku heli karo lamaane, balse Uddin wuxuu xusey in ay mudo ka dib ku guuleysteen in ay heleen haweenaydaasi 60 sano jirka ah.
“Ma ahan wax sahalan in 100 sano caruur ka weyn uu helo caruusad uu arooso, laakiin nasiib iyo ILAAH mahadii waxaan helnay hooyo cusub” ayuu yiri Uddin oo wareysi siiyey wargeyska The Times oo India oo ka soo baxa magaalada Delhi ee caasimada wadanka Hindiya.
Noor wuxuu leeyahay qoys ka kooban 122 qof oo isagu jira wiilal uu dhaley, gabdho uu dhaley, iyo ilmaha ay sii dhaleen ee awoowe u yahay.
kkkkkk aroos miyaa waa lugooyee aduunka waxakasta waa arkee hadaa nooshahay wakhtigaan caml waa wakhtiga alle xagiis loo jeestee goodlack baan leeyahay
Eng Bashi says:
Layla abaayo dareenka guurku wakhti malaha,, ee caafmaad iyo niyad sami uun bay u baahan tahay. Sida wakhti kasta loo cibaadaysto ayaa qofkuna haduu caafmaad qabo guur ugu baahan yahay, guurkuna cibaadada waa ka bar. Mahadsanid
kk Duqaan qof Baambarka u Xirtah buu Rabaa ee Nin nimo uu Naag ku Damco Kamamuqatoh 120 jir Qof Dumar ah waxaba ugumatoora dhinackasta waa wax ma Tare
A.s.c waxan salamayaa ugu horayd dhan bahda sbc. Inter. Kadib waxan leyahay waxu iskuhelay odaygani laba wax oo qima badan cimridheer iyo aroos . Fiiragara: waxa wacnayd isaga oo gursada gabadhyar oo bikra ah. Talow muslim mayahay. Weli naagaha hindida way kafiicanyihiin kuwa somalida waxan kawadaa kuwa muslimka ah ee diintayaqana mid an arkay waxan jeclaystay inan filimka duub sida ay odaygeeda daacad iyo raaliyo ugu tahay macaa waxay ogoshahay inuu gabdha kale laguursado! Alle yaa mahad oodhan iska leh
kkkkkkk walaahi odaygan caadi ma ahan
Yusuf Saxafi says:
Ahlan wasahlan wayaa marxabaa bikum wayaa ASC salan kadib aad baan ola fajacdey naftaydani arooskan cajiibka ah waxaana leeyahay anigoo u jawaba leyla ma ahan arooskan aroos lugooye ah ee adigu wali waa xamaalan karaa ee hadii uu wali dareenkiisu joogana ugu hanbalyee arooskan mahad sanid sbcna thanks allot
kkkkkkkkkk waa yaab aniga ruuntii aad buu iga qosliyaa barnamijkan kkkkkkk mahad sanidiin waa liban abdisalaan oo joga china gar ahaan hongzhou /zhejian chine ah arday
waxaan ku taagerayaa ninkaa guursaday wuuna ku mahadsan yahay odaygaa maadaama uu ka hadlay niyadiisa waayo waxaan qabaa fikir ah in nin ku haduu yar yahay iyo haduu wayn hahayba uu dhalayo haduu ilaahsiyo byyyyyyyyyyyyyyy